Okungakumbi Ngendlela Othandayo Nento Oyithandayo
Ngeenkwenkwezi, iVenus yiplanethi elawula isitayela sethu sothando. Uphawu lwezodiac oluhlala nguVenus ngexesha lokuzalwa kwakho luchaza indlela obonisa ngayo uthando lwakho kwabanye kunye nezinto ezisebomini ozithandayo. Ngokufutshane, ubonisa indlela othanda ngayo nento oyithandayo.
Ukuba iVenus iLibra kuwe, oko kungakuguqulela ukuba kuthetha ukuba kulula ukuba kunye nomkhulumi onamandla.
Unemilinganiselo enobulungisa kwaye ubonise ingqiqo ngokufanelekileyo kwibhodi njengokushiya intonga efanelekileyo kwindawo yokutyela. Unobumnandi, uthakazelisayo, umgqwetha obalaseleyo kwaye mhlawumbi ungathandi ukusebenzisa amagama angcolileyo. Ngamanye amaxesha ukhangelelana nabantu abanomdla, okungajonga ngathi akukho nto xa uthetha ukuba ugweme impikiswano.
Abantu abaPhezulu abaneVenus eLibra
Baye bafumana isitala kwaye banomusa, khangela aba bantu badumileyo kunye noVenus eLibra: UGrace Kelly, uPablo Picasso, uRichard Gere, uHugh Grant, uElvis Costello, uTim Robbins, uNkosana uCharles, uSean Connery noGeorge O'Keefe.
Umgangatho weKhadidi kunye ne-Air Element
I-Venus eLibra ikwabelana ngeempawu zekhadi kunye nomoya womoya . I-Libra njengophawu lomkhawulo lithetha ukuba awuyi kufumana umntu okhawulezayo. Iimpawu zekhadididi zizele i-vim kunye namandla kwaye ziphethe i-drive kunye nesifiso esinqabileyo. Inzondelelo kunye neenjongo zokuphila zizalise umntu oyintloko.
I-Libra njengento yomoya, kuthetha ukuba lo mqondiso unika ithuba lokuphefumula, uvula imiphunga yakho, kwaye njengesibonakaliso somoya, unesidingo esinamandla sokuziva ukhululiwe kwaye ukhululekile.
Ukuba iVenus iLibra nto ithetha ukuba uyintando yenene entliziyweni, kwaye uyakhula xa ubambisene ngokuzithandela, nothando.
Nangona ubonakala ngathi uvalelwe ngokomzwelo, ulungele ukuhlanganisa ngokukhawuleza ubomi, ngamanye amaxesha kuninzi kakhulu, kungekudala. Ukhangele umntu onokubakho ngaphezu kwesibalo samalungu akho. Uya kukwazi ngokuqhelekileyo ukuba umthandi onakho unokulinganisa okanye akwenza ube ngcono. Ekhaya, uthanda ukuzola, indawo ekholisayo. Ukuba ucinezela kumlingane wakho, kuya kwenzeka ukuba ubona indawo yokuphucula. NjengoLibra kwezinye ieplanethi, le Venus inako ukuvula ukuthanda abanye ngesondo. Kwigumbi lokulala, unesakhono ekudaleni imvakalelo yothando, kwaye uya kuhamba kubo bonke abaphuculisayo, njengamakhandlela, umculo, ishicileli kunye neentyatyambo ezintsha.
Ukuba iVenus ikuLibra kuwe, ke amathuba kukuba unesimboli, kwaye uyazi. Uyazi indlela yokubeka abantu ngokukhululeka, kwaye oku kukhawuleza kukuthandayo kumlingane onokuthi ufumane. Njengenxalenye yezinto ezimbini, uhlala ekhaya, kwaye oku kunokukwenza omnye uzive njengenxalenye yento esondelene nayo. Unobungqina, ucacile ngengqondo kwaye ucacile. Uyazi ukuba ungena nini kwaye nini ukudala umgama.
Oko Ufunayo kwiNtshato
Uyasabela kumandla eengcamango zomntu kunye nothando lokuphazamiseka ngabantu abahlakaniphile. Ukhangele iipakethe ezipheleleyo kwaye ungabonakala ungaxhomekeki ngexesha ulinganisa umlingane.
Uyakhonywa kubantu ababukeka kakuhle, abanengqondo, abanomdla kwaye baya kuziva ukuba ucinga ukuba uhleli phantsi. Uyabaxhamla abo baxhasa imbangela yobulungisa kwaye bavaliwe yi-snobby, abantu abanekratshi okanye abakhukhumeleyo.
Kulo mcimbi, nguwe ohamba ngegumbi le-tray yeCosmos kunye kunye nokuzisa abantu omnye komnye ngokukhululeka kwenkqubo yentlalo. Ingqondo yakho icacile, ngoko abahlobo baxabisa ulwazi lwakho kunye neengcebiso. Xa kuziwa ekunikeni kunye nokuthabatha, uyaqinisekisa ukuba izinto zilinganisekile, kwaye ziya kukwenza ukuba akunjalo. Uyakhatyelwa kubahlobo abakhethiweyo kunye nabahlakaniphile abaya kubangela ukuba ukhangele kakuhle, naye.
Ukugqithisa ulwimi lwakho kunokukukhokelela ekubhaliseni, ukwenza iintetho, ukuyila imigaqo-nkqubo okanye ukusebenza. I-finesse yakho yentlalo ikunceda ugcobe ivili kunye naluphi na umsebenzi kwaye unokukufumana ngaphambili, ngakumbi kwiintengiso okanye shishini ngokubanzi.
Cinga ukuhamba ngokubambisana okanye ukusebenzisana ukususela xa usebenza kakuhle xa usebenza kwi-tandem.
Venus e-Aries Abasetyhini
I-Hard Rock Frontmen yama-80s
'Atrás' okanye 'Detrás'?
Ukufunda i-Quiz ethi 'Kutheni Ndifuna Umfazi' nguJudy Brady
Iingoma eziPhezulu eziPhambili zee-80s